अर्थमन्त्री ज्यू , पूँजी वजारमा मलमपट्टी लिएर निस्कने कि तरवार अर्थ मन्त्रीलाई खुल्ला पत्र राधा पोखरेल – Shirish News
अर्थमन्त्री ज्यू , पूँजी वजारमा मलमपट्टी लिएर निस्कने कि तरवार अर्थ मन्त्रीलाई खुल्ला पत्र राधा पोखरेल
अर्थमन्त्री ज्यू , पूँजी वजारमा मलमपट्टी लिएर निस्कने कि तरवार राधा पोखरेल ,
सम्माननिय अर्थमन्त्रीज्यू नमस्कार !! तपाईं अर्थमन्त्री हुनुभएको दिन अरु जस्तै म पनि देशले विज्ञ अर्थमन्त्री पाएकोमा खुशी भएको थिए !आँसा थियो, वाम गठबन्धनको सरकारसंगै विज्ञ अर्थमन्त्री देशले पाएको छ अव अर्थतन्त्र पनि सहि दिसामा हिड्ने छ पुँजी वजारमा पनि नयॉ उदयमान हुनेछ ! धेरैको अनुमान थियो, चमत्कार गर्नुहुनेछ । म पनि ढुक्क थिएँ, तर, आज म गलत सावित भएकी छु ।केही महिनादेखि निरन्तर ओरालो लागेको पुँजी बजारमा घटबढ हुने सामान्य प्रक्रिया नै हो । र, पुँजी बजारको व्यूटी पनि यही हो ! भन्नेहरुको पनि पुँजी बजारमा कमी छैन । तर यसो हुँदै गर्दा यहाँहरुलाई विपक्षले लगाएको दाग वामपन्थी भनेका पुँजी बजारका लागि अभिसाप नै हुन्न भन्ने कुरा पनि अछुतो रहेन है ??निरन्तर ओरालो लाग्दा विशेष गरी साना र नयाँ लगानीकर्ता निकै चेपुवामा पर्ने गरेका छन् ! डा. साव जिम्मेवार व्यक्तिले सम्वेदनशिल क्षेत्रको बारेमा असम्वेदनशिल कुरा गरिदिँदा त्यसको कति गम्भिर असर पर्दोरहेछ भन्ने कुरा नेपालको पुँजी वजारले देखाइसक्यो ! यस्ता असान्दर्भिक तर्कले डुव्ने त आखिर साना लगानिकर्ता नै हुन !उनीहरुको पीडाको कतैबाट पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । हाम्रो बजारमा पछिल्लो समय साना लगानीकर्ता र गृहिणीहरुको ठूलो समूह प्रवेश भएको छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने सवै करोडौंका मालिक हुदैननन् यहाँ कयौं गृहिणीहरुले आफुले नखाएर, ५० लाख युवाहरू आज पनि विदेशमा रगत-पसिना बगाएर, कयौंले घरजग्गा धितो राखेर लगानी गरेका छन् ! अझ भन्नौ‌ हामी जस्ता युवाको बजारमा लगानी गरी नेपालमै केही गरौं भन्ने सोचका साथ विदेश मोह नै हराएको देख्दा मेरो मन रोमान्चित भएर ऑउछ ! दैनिक घरायशी खर्च कटाएर सेयर बजारमा लगानी गरेका उनीहरुको अवस्था झन् निकै दयनीय बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तै भइरहे त धेरै जनाले आत्महत्या गर्न बेर छैन यसको सारा दोष तपाइँ र तपाइँको पार्टीमा लाग्न सक्छ ! रिसानी माफ गर्नुस् । सत्य बोल्ने साहस गर्नैपर्छ ।मेलै सेयर वजारलाई नै बढाइदिनु पर्यो भन्दै लेखेको आरोप लाउनु सक्नुहुन्छ तर डा. साव लाई मैले सेयर वजार वढाउनु पर्छ भन्न खोजेकी हुँदै हैन है ! दुई मन्न्री दुई थरी कुरा ( अर्थ र उर्जा ) किन गरिन्छ ? एक मन्त्रीको अभिव्यक्ती अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने आउछ भने अर्को मन्त्री भन्छन तपाँई संग सेयर छ भने ज्वाई वनाउनेको लर्को लाग्छन !!
अर्थ मन्त्री ज्यू ,विश्वकै महगो व्रोकर कमिसन घटाउन तिर खोई पहल गर्नु भएको ? कमिसन लाई ०.१० प्रतिशत देखी ०.१५ प्रतिशत ( हुनत यो पनि महगो नै हो ) सम्म गरिने छ भनेर वजेट मार्फत सम्वोधन गरिदिनुस । राष्ट्र वैंकको अकर्मण्यताले गर्दा आज हामिले पुरपुरोमा हात लगाउनु परेको छ । ७७ जिल्लाका नगरिक के नेपाली होईनन् ? तिनको खोई पूँजी वजारमा पँहुच ? तपाँईले लगानिकर्ताका प्रतिनिधी संगको भेटमा “ सवै नेपालीको सेयरमा लगानी होस , एक दुई वटा वण्ड पेपर घरमा होस , केही रकम वैंक खातामा होस , सेयर कसैको गोदाममा मात्रै थन्किनु पर्ने छ ? “ भनिरहँदा म जस्ता लाखौं लगानिकर्ता पुलकित भएको थियौं ! खोई त्यता तर्फ पहल कदमी लिनु भएको ? अनलाईन ट्रेडिड: समयमै ल्याउनको लागी पहल गरिदिनुस । नेपाल पूँजी वजार लगानीकर्ता संघको भेटमा सफ्टवेयर वनाउने ‘यूमोरी’ प्रमूखले मेरो तर्फवाट समयमै सरकारलाई सफ्टवेय हस्तान्तरण हुनेछ , भन्नु भएको छ । कतै पेमेन्टको कारणले समयमा आउन नसक्ने त होईन ? वर्षेउनी वजेट मार्फत NRN लाई भित्र्याइने छ , भनिन्छ ! तर कार्यविधी वनाईदैन । उनिहरुले लगानि गरेपछी रिटर्न वाहिर लान खोज्छन । के भोलन्टिएर सर्भिसको लागी मात्रै लगानि गर्नु भन्न खोजिएको त होईन ? अनि अर्को कुरा वजारमा ठूला माछाले नानाभाति हल्ल चलाएर साना माछालाई सकाउनै लागे । VAT , PAN र CGT को भुत देखाएर , यो किचकिच पुस्तौनी हो । यस्लाई पनि वजेट मार्फत सेफ लियाण्डिड: गरिदिनुस । अर्थ मन्त्री ज्यू यहाँको केही दिन पहिलाको एउटा भाईरल भिडियोमा मैले पनि सुने ‘ चुरोट खाएको छ , स्कृनको अगाडी वसेको छ , सेयरको भाउ वढेन भनेको छ , के मैले सेयरको भाउ वढाई दिनु पर्ने ? तपाँइले यसो भनि रहँदा झण्डै २० लाख लगानिकर्ताको १७ खर्व ( २०७३ श्रावणमा २२ खर्व थियो ) लाई मजाक सम्झनु भएको हो ? होईन तपाँईलाई सेयर मार्केट संग सार्है पेट पोलेकै छ भने वजेट मार्फत “ आजकै मिति देखि सेयर कारोवारको दोस्रो वजार वन्द गरिएको छ “ भनि दिनुस न त !! गत डिसेम्वरमा चाईनाको सेयर मार्केटमा यस्तै फल आईरहदा त्यहाँको अर्थ मन्त्रीले नेशनल टिम खडा गरि ४५०० अंक सम्म वजारलाई ल्याउन टार्गेट दिएका थियो । नभन्दै आज चाईनिज सेयर मार्केटमा हेर्नुस त कति सुधार भयो !! तपाँईले पनि वजेट मार्फत चारलाईन लेखि दिएर मार्केट मेकरको रुपमा कर्मचारी संचय कोष लाई र नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरको रुपमा भित्र्याई दिनुस । वैंक व्याज हेर्नुस त कहाँ पुग्यो ? ८ प्रतिशतमा लिएको सेयर कर्जा आज १६ प्रतिशत पुग्यो । के हामी यो व्याज धान्न सक्छौं ? फास्टट्राकवाट विदेशी लगानि भित्र्याउन पहल गरिदिनुस । मार्जिन खुकुलो गरि सेयर कर्जालाई ७०प्रतिशत पुर्याई दिनुस ता की वजारका ठूला माछलाई छटपटी होस । पक्कै पनि वजारमा फैलिएको र्यूमर धेर थोर यहाँले पनि सुन्नु भएकै होला । समय घर्के पछी पछुताउनु र मरेको वाउलाई केरा खुवाउनु उस्तै उस्तै हो । आज जसरी देशले सक्षम सरकार पाएको छ , दुई तिहाईको सरकार यो सरकारले जे पनि गर्न सक्छ तर सरकारमा रहनु हुने यहाँ हरु जस्तो मन्त्रीको इच्छा शक्ति हुन जरुरी छ। संस्थागत लगानीकर्ताको न्युनता र बित्त बजारमा तलरलताको अभावसँगै बढ्दो ब्याज दर र सेयर निश्काशन तथा आपुर्तिमा भएको बृद्धिले अहिले सेयर मूल्य प्रभावित भएको छ । नेपालको पूँजी बजार सतही रुपमा रहनुका साथै यसको दायरा संकुचित छ, । पूँजी बजारमार्फत ठूलो लगानी परिचालन गर्न संस्थागत र नीतिगत सुधारको आबश्यकता देखिएको छ । तपाइले भने जस्तै कृषि, पर्यटन, हाइड्रो उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने रकम जुटाउने माध्यम त धितोपत्र बजार नै हो नि होइन र ? अनि कसरी धितोपत्र बजार अनुत्पादक क्षेत्र हुन्छ? धितोपत्रको दोस्रो बजार नहुने हो भने प्राथमिक बजारमा कसले सेयर किन्छ र कम्पनिहरुले पूजी संकलन गर्न सक्दछ्न ? के उत्पादनशीलको नयाँ परिभाषाः ( तपाइको भाषामा) आफुसँग सँग भएको पैसा बैंकमा फिक्स डिपोजिटमा राख्ने, जग्गा जमीन र घर सकेसम्म जोड्ने, डलर साटेर थन्काकाउने अनी अरुलाई उत्पादनमुलक काममा लगानी गर भन्दै उपदेश दिदै हिड्ने ? आज जनताहरु भन्न थालेका छन् कि जनताबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिलाई मात्र सरकारमा मन्त्री बनाएको भए यसरी नकारात्मक अभिव्यक्ति दिएर बलेको आगोमा घ्यू थप्ने काम पक्कै पनि हुने थिएन् !कुनै दिनको चर्चाले तपाईँलाई लोकप्रियताको चुलीमा पुर्याएको थियो, तर आजको चर्चाले तपाईंलाई राजनीतिको सुली चढाउँदैछ ! त्यसैले आज सबै कुरा ओझेलमा पर्ने गरी तपाईंकै चर्चा छ सर्वत्र ।२०६६ सालमा गभर्नर छँदा तपाइकै कार्यकालमा लगानीकर्ताले धेरै नै मार खेप्नुपरेको थियो । यसको अर्थ मैले विगतको कुरा गर्न लागेकी होइन; वर्तमानको पीडा यस पत्रमार्फत पोख्न लागेकी मात्र हुँ । तपाईंप्रतिको आशा र विश्वास मान्छेमा जाग्दै थियो । तर, तपाइले बीबीसीमा दिएको अन्तरवार्ता नै अभिसाप बन्न पुगिदियो ! तपाईंप्रतिको विश्वास आज बिडम्बनामा बदलिएको छ । झन्डै झन्डै सिसा फुटेझैं टुक्राटुक्रा बन्न पुगेको छ । श्वेत-पत्रमार्फत पुँजी बजारलाई समेटनुहुनेछ र २० लाख लगानीकर्तालाई मलम पट्टि लगाउन चाहनुहुन्छ भन्ने तपाईँसँग जनताको ठूलो अपेक्षा थियो तर हाम्रो अप्ठेरोमा अट्टहास गर्ने शासक बन्नु भो र हामिलाई खुईल्याई दिनु भो । तपाईहरूको ब्यक्तिगत अहं तुष्टिका लागि हामी नागरिक तपाईहरूका विचारको शिकार कति दिन भइरहने ? अनि कति समय तपाईहरूको वादको बन्दी बनिरहने ? युवाहरूले आफ्नै देशमा स्वरोजगार/रोजगार मागिरहेका छन् । महिलाले समानता र सुरक्षा खोजिरहेका छन् । हो सरकार !! हामी नागरिकले न्याय, सुरक्षा, शान्ति र समृद्धि खोजिरहेका छौं । के यो हाम्रो अपराध हो ? यहि जेठ १५ गते इतिहासकै शक्तिशाली आउन लागेको बजेटमा Cgt , vat , pan को भुतवाट फेरी साना लगानिकर्ता मारमा पर्दैछन् ! यसर्थ पूँजी वजारलाई अवको वजेटवाट सधैं भुतले झै तर्साउने यस्ता कुराहरु किनारा लाउनु पर्छ २० लाख लगानिकर्ताको मलमपट्टी बन्नु हुन्छ या त पेटमा लात हान्नु हुन्छ तपाइकै हातमा छ !समय निकै शक्तिशाली हुन्छ । समयले कसैलाई पर्खंदैन । नसम्झनु होला, यो परीक्षा विरोधीको मात्र हो, यो त नेपाली जनताले तपाईंमाथि लिँदै गरेको परीक्षा हो । के तपाईं परीक्षामा हामीले अपेक्षा गरेझैं खरो उत्रनु होला ? खरो उत्रनुहोस् शुभकामना छ तपाईंलाई ! शुभकामना मात्रै होइन, साथ पनि हुनेछ ।
राधा पोखरेल नेपाल पुँजी वजार लगानिकर्ता संघको उपाध्यक्ष हुन् !
गोदाममै थन्कियो राहतको खाद्यान्न
प्रदेश २ सरकार खतरामा, नेकपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता